Ụdị nke hens Oravka: nkọwa, foto, arụpụta ọrụ, mmezi na nri - Ugbo ala ugbo - 2020
Ọ bụ Oravka: Ihe ndị dị mkpa nke idebe n'ụlọ
N'ebe a na-emepụta ihe, a na-esiwanye ọtụtụ ụdị ahịhịa na ọkụkọ nke oge a. Otutu udiri anumanu nwere ike isi ike ichighari maka ndi oru ugbo ozo. A na-elebara anya na Oravka pụrụ iche. Anyị na-amụta ihe ndị bụ isi na ọnọdụ njide.
Live arọ n'ike mmụọ nsọ na ọkụkọ
Ịgba akwụkwọ, mmepụta mmanụ na akwa akwa
Ihe choro maka ulo
Ogige na-eje ije
Olee otú iji die oyi oyi
Mkpụrụ ndụ Oravka sitere n'ugwu ndị dị na Slovakia. Ha na-abụ ụdị ụdị anụ ahụ. A na-arụ ọrụ nke ndị na-azụlite Slovak na mmelite nke ọkụkọ dị n'ógbè ebe a na-ebulite n'ógbè ndị dị elu, na-eme ka ikike ngbanwe ha na ihe ngosi na-arụpụtawanye.
Ị ma? Maka oge mbụ, a na-elekọta ọkụkọ na ala nke Etiopia oge a.
O kwere omume inweta ihe ọma dị mma, ọkụkọ na-enweta ngwa ngwa ma nwee ezi mmepụta anụ. Oravki nabatara mgbanwe mberede na elu na nrụgide nke ikuku. Ụdị ahụ bụ nwata na ọrụ nke ndị na-azụ azụ na-aga n'ihu.
Oravka ghọrọ onye mara mma na Slovakia na Ukraine na mpaghara Carpathian. Nnụnụ ahụ bụ ịdị arọ dị arọ, nwere ezigbo thermoregulation, na-anabata obere okpomọkụ n'ihi oke osisi na ngwa ngwa gbanwee n'ọnọdụ ọhụrụ.
ahụ - ọkara n'ogologo, ogologo oge, ya na ahụ ike nke ọma;
isi - gburugburu, ọkara nha;
olu dị obere;
mbo - dum, ewepụghị, ọbara ọbara;
ọla ntị - acha uhie uhie, oblong;
anya - red-orange, obere;
beak - ike, odo;
ụkwụ - ike, odo na-aga agba ntụ-edo edo;
nku - ọkara nha;
ọdụ - ọkara;
osisi - oké, siri ike;
acha ọcha, ma e nwere ndị nnọchianya na agba aja aja, ọbara ọbara na-acha uhie uhie na-acha odo odo.
Ụdị nnụnụ nnụnụ ahụ dị jụụ, obiọma, enyi, ọ bụghị esemokwu, ntakịrị ọchịchọ. Naanị roosters nwere ike igosi obi ọkụ ma mee ka esemokwu dị.
Ụdị anụ ọkụkọ nke anụ ọkụkọ gụnyere ndị Augsburger, Red-Tailed, Icelandic Landrace, Master Gray, Galan, New Hampshire, Crewker, Forverk, Tricolor, Tsarskoye Selo, Plymouthrok, Kotlyarevskaya, Moscow White, Maran, Moscow Black, Black Pantsirevskaya , Transylvanian, Bress Gali, Paduan, Velzumer.
A na - echekwa mmuo ahụ na - atụgharị uche, ụmụ nnụnụ Slovak na - arụ ọrụ dị mma na ọrụ nne ha ma na - enwe obi ụtọ ilekọta ụmụ ha na ntụrụndụ.
Ụdị ahụ nwere ezigbo mmepụta anụ na ngwa ngwa na-enweta ibu arọ. Anụ ahụ dị ezigbo ụtọ.
Ibu arọ nke nne okuko ahụ dị iche site na 2,5 ruo 3 n'arọ, oke ọkpọ kwaa paịnd dị arọ.
Mmekọahụ na-eme mgbe ọ dị ka ọnwa isii. Ruo otu afọ, nne okuko nwere ike ibu 200 ruo 210 àkwá dị arọ na-eru ihe dị ka 55 g. Eggshell dị oke, agba aja aja.
Anyị na-adụ gị ọdụ ka ị gụọ banyere etu esi emewanye mmepụta anụ na ọkụkọ na oyi, ihe vitamin ndị na-enye ọkụkọ iji mee ka mmepụta mmepụta.
Ọkụ Slovak adịghị mma, ha na-adaba maka nri nkịtị. Ma ihe oriri kwesịrị itinye nri protein iji mee ka nnụnụ ahụ nwee ike ịzụlite ma na-emepụta ahụ ike. Ụdị anụ ndị na-eri anụ nwere mgbanwe dị ngwa nke ọha mmadụ, ha na-adịkarị mfe ibu oke n'ihe banyere ịṅụbiga mmanya ókè. Site n'igbu abụba buru ibu, imepụta mmanụ na ọkụkọ na-ebelata.
Ọkụkọ na-eto ngwa ngwa ma nweta ahụ ike, ha chọrọ nri nke nwere ọtụtụ protein. Ị nwere ike iji ọkpụkpụ anụ na nri azụ, decoctions anụ na azụ n'efu. Ihe oriri nke ọkụkọ gụnyere mkpụrụ ọka cereal.
Ị ma? Ọ dịwo anya a kwenyere na ndị na-anụ egwú na-abụ abụ na oge ụfọdụ na-ekwu banyere ihu igwe.
Ihe bara uru maka ha na-eji mmiri ara ehi, na-esite na efere anụ ma ọ bụ mmiri ara ehi mmiri ara ehi na mgbakwunye nke poteto, carrots, herbs. Ihe oriri na-agụnye cheese, obere vitamin na ịnweta. Kwa ụbọchị òkè maka ọkụkọ ji nwayọọ nwayọọ mụbara site na pasent 15.
Iji nwekwuo mmepụta na uto nke anụ na àkwá, ọ dị mkpa iji ọka nweta nri (ihe dị ka pasent 60 nke nri). Ezigbo ọka ọṅụṅụ a kụrụ: ọka wheat, ọka, ọka, ọka bali, rye. Protein mejuputara ntụ ọka site na azụ na ọkpụkpụ, nakwa dịka a na-ahụghị n'oge ọ bụla na-aga ije na ikpuru dị iche iche.
Anyị na-atụ aro ka ị gụọ banyere otu esi eme nri maka ọkụkọ na ụlọ, ole nri ị ga-etinye na ọkụkọ otu ụbọchị, yana otu na ole na-eri nri ọkụkọ.
A na-eweta uru ndị nnụnụ nwere site na ihe ndị dị na mkpo - peas na soybeans. Ọ dị mkpa ịgụnye akwụkwọ nri na nri. Ọtụtụ vitamin bara uru na ọka germinated. Ọ dị mkpa iji nye vitamin na mineral zuru ezu, gụnyere shells ma ọ bụ nzu dịka isi iyi nke calcium na nri kwa ụbọchị.
Ụdị a na-anabata mgbanwe mberede na ifufe na oyi. Ọnọdụ bụ isi maka nkwụsị ha bụ nnukwu ọkụkọ ọkụ na eriri ụkwụ. Nnụnụ ahụ agaghị ebi n'ọdụ ụgbọ mmiri, ọ naghị eje ije.
Ọ dị mkpa! N'ọkwá mmiri kwesịrị ịdị mmiri dị ọcha.
Okpokoro ahu kwesiri ibu obosara na ulo ala. Na okpomọkụ ekwesịghị ịda n'okpuru + 5 ° Celsius. Ọ bụ ezie na ìgwè ahụ na-eguzogide oyi, okpomọkụ dị ala na-emetụta mmepụta. Iru mmiri ekwesịghị ịdị na 55%, na iru mmiri dị elu nwere ọnya nke ịrịa ọrịa.
A ghaghị ịkwado coop ahụ mgbe niile ma kpochaa ya. A na-eji eriri eji akwa akwa. A na-etinye perches na gburugburu ebe dị elu otu mita site na ala. N'ebe zoro ezo, jụụ, ebe nchekwa echekwara na ọ dị mkpa iji kwadebe ebe maka nests. Ọ dịkwa mkpa ịnye ọkụ, na enweghị ìhè anyanwụ na-eme ka mmepụta mmanụ na-ebelata.
Ogige na-eje ije bụ ihe dị mkpa maka nlekọta nke nnụnụ na-aga nke ọma. Ọkụ Slovak dị ezigbo aka, ha na-enweta nri mgbe ha na-eje ije, ha hụrụ ahịhịa ndụ na ikpuru. Ịga ebe ka mma. Ogige dị mkpa iji chebe okporo.
Oravki na-anabata oyi ọma, ha nwere oke osisi dị oke mma, nwee ike ichebe ọbụna megide ifufe siri ike na oyi.
Ọ ga-aba uru maka ị gụọ gbasara otu esi ewu ọkụkọ coop maka oge oyi, ụdị ọkụ na ventilashion kwesịrị ịdị na ọkụkọ coop n'oge oyi, nakwa otu kacha mma iji kpoo ọkụkọ coop n'oge oyi.
Idebe okpomọkụ anaghị emetụta ahụ ike nke nnụnụ, naanị n'oge a na-akwụfu ya dị mkpa iji chebe ha pụọ ​​na hypothermia.
Ụdị ahụ nwere ihe ndabara na uru ya. Ọ dị mma maka ịzụlite na ebe ugwu.
na-anabata nrụgide na ọnọdụ okpomọkụ, gbanwee ngwa ngwa;
anaghị achọ nri oriri pụrụ iche;
ngwa ngwa na-enweta ahụ ike;
ezi mmepụta anụ;
ihe omimi zitere nasizhivaniya.
ihe isi ike n'inweta obere ngwaahịa;
Chicks nwayọọ nwayọọ;
enwe ike ibute ọrịa.
Ya mere, anyị zutere ìgwè pụrụ iche nke ọkụkọ si Slovakia. Oravka nwere ọtụtụ uru, ụdị dị mma maka ịzụlite na ọnọdụ ihu igwe pụrụ iche elu na ugwu.
Ọ dị mkpa! Mkpụrụ kachasị na-emepụta afọ abụọ gara aga, wee jiri nwayọọ nwayọọ belata. - kwa afọ site na pasent 20%.
Nhọrọ kacha mma maka obere ugbo. Na nlekọta na nlezi anya kwesịrị ekwesị, ọ na-eto ngwa ngwa ma nwee ezigbo mmepụta anụ.